ကိုယ့်မှာ ရှိတာ ကို ပြပြီး စားချင် လို့ မော်ဒယ် ဝင် လုပ်တာ” လို့ ပြော လာ တဲ့ ရွှေအိမ်စည် (ရုပ်သံ) – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကိုယ့်မှာ ရှိတာ ကို ပြပြီး စားချင် လို့ မော်ဒယ် ဝင် လုပ်တာ” လို့ ပြော လာ တဲ့ ရွှေအိမ်စည် (ရုပ်သံ)
ကိုယ့်မှာ ရှိတာ ကို ပြပြီး စားချင် လို့ မော်ဒယ် ဝင် လုပ်တာ” လို့ ပြော လာ တဲ့ ရွှေအိမ်စည် (ရုပ်သံ)
ရွှေအိမ်စည် ကတော့ Miss အလှမယ်၊ မော်ဒယ် တစ်ယောက် ပါ။ ဆံပင် ရှည်ရှည်လေး နဲ့ ကျော့ရှင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့သူမရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည်ကတော့ စကားပြော ရင်လည်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောတတ်ပြီး သူမကို အမျိုးသား ပရိသတ်ထက် အမျိုးသမီး ပရိသတ်တွေက ပိုမိုသဘောကျ အားပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ”ကိုယ့် ရဲ့ LOOK ကို ပြပြီး စားချင်တဲ့ အတွက် ဒီ Modeling Industry / မော်ဒယ်လောက ထဲကို ဝင်လာတာလေ။
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အရာတွေ ကို ပြမစားရရင် ဘာကို ပြစား ရမလဲ? ကျမ ရဲ့ ရင်သားတွေက ဘယ်သူ့ ကို ဘာ လုပ်ထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမ်းတွေ Feel ဖြစ်ပြီးတော့ လိုက်ရန်တွေ မူနေကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါကြီးက ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ ပေးနေတာပါ” လို့ ပြောလာတဲ့ အလှမယ် ၊ မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် ရွှေအိမ်စည်
ေ႐ႊအိမ္စည္ ကေတာ့ Miss အလွမယ္၊ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ ပါ။ ဆံပင္ ရွည္ရွည္ေလး နဲ႔ ေက်ာ့ရွင္းၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ ကို ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိတဲ့သူမရဲ႕ ဟန္ပန္အမူအရာေတြက ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ အေတာ္ေလးကို ေရပန္းစားပါတယ္။
ေ႐ႊအိမ္စည္ကေတာ့ စကားေျပာ ရင္လည္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာတတ္ၿပီး သူမကို အမ်ိဳးသား ပရိသတ္ထက္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္ေတြက ပိုမိုသေဘာက် အားေပးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ”ကိုယ့္ ရဲ႕ LOOK ကို ျပၿပီး စားခ်င္တဲ့ အတြက္ ဒီ Modeling Industry / ေမာ္ဒယ္ေလာက ထဲကို ဝင္လာတာေလ။
ကိုယ့္မွာ ရွိတဲ့ အရာေတြ ကို ျပမစားရရင္ ဘာကို ျပစား ရမလဲ? က်မ ရဲ႕ ရင္သားေတြက ဘယ္သူ႔ ကို ဘာ လုပ္ထားလို႔လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမ္းေတြ Feel ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လိုက္ရန္ေတြ မူေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါႀကီးက ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြပဲ ေပးေနတာပါ” လို႔ ေျပာလာတဲ့ အလွမယ္ ၊ ေမာ္ဒယ္ ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေ႐ႊအိမ္စည္
Previous post ကြည့်ရှု သူ (၁) သန်း ကျော် ခဲ့ တဲ့ ထိ အားပေး ကြမ်း ခဲ့ကြ တဲ့ “ကိုဗစ် နဲ့ ဇီဇာ ကြောင် မေမေ ဇာ” ဆို တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post မြင့်မြတ် ရဲ့ အဖေနဲ့ရော အမေနဲ့ပါ ရင်းနှီးတာကြောင့် သူတို့မိသားစု အကြောင်းကို ဖွင့်ဟ​လိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ